Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – बौद्ध दर्शनमा राजनीतिक विचारहरू
Oct 18, 2016 admin Local News, Religion
–सुर्य लोप्चन तामाङ आजभन्दा करिब २६०० वर्ष अघि हाम्रो देश नेपाल मै जन्मनु भएको भगवान गौतम बुद्धले मानव कल्याण, जीव कल्याण र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था एवं ब्रम्हाण्डको उत्पत्तिको क्रम र प्रकृतिको विषयमा धेरै इतिहास र प्रणालीहरू बताउनु भएको थियो । जुन कुराहरू (त्रिपिटक)मा संकलन गरिएका छन् । यसै क्रममा ‘चक्कवत्ति सिहनाद सूत्रमा’ बुद्धले देश सञ्चालनमा राजनीतिक विचारहरू यसरी व्यक्त गर्नुभएका छन्, “यदि जनताको बिचमा सम्पत्ति वितरण सहज रूपमा गर्नको लागि उचित पाईला चालिएन भने देशमा गरिबी र भोकमरी बढेर चोरी सुरु हुन्छ र सामाजिक अशान्त फैलिन्छ, त्यसपछि भोकमरी सुरु भई हातहतियार उठाउने काम प्रारम्भ हुन्छ ।
विभिन्न खाले द्वन्द्वहरू सुरु हुन्छन्, हत्या र हिंसाले स्थान पाउँछ । झुठो कुराहरू बोल्न सुरु हुन्छ । विस्तारै कानून र व्यवस्थाको व्यापक उल्लंघन हुन गई देशमा मानविय मुल्य र मान्यताहरूको विघटन हुनेछ ।” अनि लोभ, अपमान, घमण्ड, ईष्र्या, डाहा आदिद्वारा उत्प्रेरित भएर द्वन्द्व, विद्रोह, आक्रमण सुरु भई मुलुकमा अशान्ति फैलिँदै गएर असफल मुलुक बन्न सक्दछ ।
हाम्रो देश आजभन्दा करिब १० वर्ष अघि झण्डै १०–११ वर्षको द्वन्द्वमा परिसकेको छ । जसमा करिब १७,००० हजार भन्दा बढि नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका र त्यो भन्दा बढी अंगभंग तथा बेपत्ता भएको ईतिहास हामीमा ताजै छ । जुन द्वन्द्वलाई आजसम्म पूर्ण रूपमा शान्त पार्न सकिएको छैन । कति चेलीहरू विधवा भईन, कतिपय आमाबुबाहरूले छोराछोरी गुमाए, कतिपय घरबार बिग्रीए, त्यसको सही लेखाजोखा भईसकेको छैन । जनतामा उकुस मुकुस अझै जारी छ ।
यसै क्रममा केही वर्षअघि हाम्रै मुलुकमा महाभूकम्प गयो, जसको कारण दसौं हजारले ज्यान गुमाए र करिब ५ देखि ६ लाख भन्दा बढी घरबार विहिन भएका छन् । अझै पनि बस्नलाई घर छैन । खानलाई अन्न छैन । कमाउनलाई रोजगार छैन तर करिब दुई वर्ष बित्न लागि सक्यो राज्यले उचित सहयोग र व्यवस्था गर्न नसकेकोले पीडित जनतामा निराशा छाउँदै गईरहेका छन् । आशाहरू मरिरहेका, देशमा सरकार नभएको महसुस हुँदै गईरहेका छन् । जसको कारण करिब २,६०० वर्ष अघि लुुम्बिनी नेपालमा जन्मनु भएका महामानव गौतम बुद्धले भन्नु भएको जस्तो देशमा गरिबी, बेरोजगारी बढ्न गई देश पुनः अशान्त र नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने त होईन ? यदि यसो भएमा छिमेकी वा बाह्य देशले चलखेल गर्ने मौका पाउँदछन् अनि हामीले सोचेको र चाहेको जस्तो राष्ट्रियता र विकासको मोडेल प्राप्त गर्न सक्छौं जस्तो लाग्दैन ।
अन्तमा सरकार वा शासकले जनताबाट शक्ति प्राप्त गर्छ । जनताको मन्जुरीद्वारा छानिएको शासक सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुकको उत्थान वा पतन देशकै शासकमा भर पर्दछ । जब एक राज्यको शासक न्यायी र असल हुन्छ तब मन्त्रीहरू न्यायी र असल हुन्छन् । जब मन्त्रीहरू न्यायी र असल हुन्छन्, तब सरकारका उच्च पदस्थ र कर्मचारीहरू न्यायी र असल हुन्छन् । जब उच्च पदस्थ र कर्मचारीहरू न्यायी र असल हुन्छन् तब मर्यादा र रोलक्रम न्यायपूर्ण र राम्रो हुन्छ ।
जब रोलक्रम न्यायपूर्ण हुन्छ तब देशका जनताले न्याय पाएर असल हुन्छन् । अनि मात्र मुलुकले सोचेको र चाहेको जस्तो राष्ट्रियता र विकासका मोडेलमा अरु राष्ट्रको तुलनामा चाँडो उन्नती तर्फ अघि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा सायद कसैको दुईमत नहोला ? तसर्थ आजैदेखि माथिका कुराहरूलाई मनन गर्दै भगवान बुद्धको बौद्ध दर्शनमा राजनीतिक विचारहरूलाई समाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक दलका नेता तथा देश र जनताप्रति बफादार, ईमानदार नागरिकहरू उक्त बौद्ध दर्शन प्रति चिन्तन लिएर अगाडि बढ्न सके आफु र देशकै भलाई हुने थियो कि ?
tweet बलिदेखि सतिसम्म